Wo fi ɔwԑn aban ahyehyԑde no mu – na woakɔ ԑhe? – 4Jehovah (Yehowa)
Posted in Asoeɛ, Nsԑmmisa Wɔtaa Bisaa ne Mmoa a Wɔde ma Yehowa Adansefo, Woafi Yehowa Adansefo mu
Nanso, bere a Ɔkyerԑ sԑ ɔne Nokware no, Ɔwԑn Aban Asafo no reyi yԑn asotire wɔ Onipa a yebetumi akɔ ne nkyԑn. Adwene a ԑwɔ kyerԑwnsԑm yi mu a wɔka fa wɔnho no yԑ nea ԑfa Yesu Kristo, Onyankopɔn Ba no ho ankasa. Yesu ne Onnii a na N’akyidifo no ԑrekasa akyerԑ no sԑ “Awurade Hena nkyԑn na yԑnkɔ? Wo na wowɔ daa nkwa nsԑm na yԑagye adi na yԑabehu sԑ wone Ɔkronkronni a Ofi Onyankopɔ nkyԑn”-Yohane 6:68-69 Wiase Foforo Nkyerԑase-WFN. Ԑnyԑ Ahyehyԑde na na wɔreka ho asԑm. Afei “Nokware no” nnyԑ Ahyehyԑde nso. Kyerԑwnsԑm ada no adi sԑ Yesu ankasa ne “Ɔkwan no ne Noware no ne Nkwa no”. (Yohane 14:6 Modern Language Bible)
Sԑ Adansefo no, wɔkyerԑԑ yԑn sԑ ԑsԑ sԑ nnipa “ba Yehowa Ahyehyԑde no mu ama woanya nkwagye” (Ɔwԑn Aban November 15:1981), nanso Yesu ankasa kaee sԑ “Obiara mma Agya no nkyԑn gyesԑ ɔnam me so”.(Yohane 14:6). Asafo no kyerԑ yԑn sԑ “ Nokware Nimdeԑ” ho hia, nanso Yesu kae kyerԑԑ Farasifo sԑ “Morehwehwԑ kyerԑwnsԑm no mu efisԑ modwenee sԑ saayԑ no mubenya daa nkwa nanso eyinom na edi me ho adanse. Nanso mompԑ sԑ moba me nkyԑn na moanya nkwa”(Yohane 5:39-40 WFN)
Enti, dԑn ne Aba ԑwᴐ nsԑm no mu? Aba ԑwɔ nsԑm no ho ni “Ɔkwan no a ԑde kɔ nkwagye mu a Yesu pae mu kae no nnyԑ Ahyehyԑde bi a obi bԑdɔm anaasԑ Nokware Nimdeԑ a obenya- ԑwom sԑ eyi ho hia de. Ԑsԑ sԑ nkurɔfo ba Yesu nkyԑn tēē. Wɔ apam foforo nhyehyԑe no ɔkwan foforo biara nni hɔ aa ԑkɔ Agya no nkyԑn gyesԑ ɔnam Yesu so.
Onyankopɔn somaae ne Ba no baae asase so sԑ ɔma “Apam foforo nkɔmhyԑ a ԑwɔ Yeremia Ti 31no nya ne mmamu. Wɔ Apam foforo yi ase no wɔn nyinaa behu Me-Yehowa) efi akumaa so kosi ɔkԑse so, Yehowa anom asԑm ni. “Efisԑ Mede wɔn mmarato befiri wɔn ne wɔn bɔne merennkae bio”(Nkyekyem 34 WFN)
Nnipa abɔnefo nyinaa mpo tuutuufo ne towgyefo akohwifo bae Yesu nkyԑn na wonyae bɔne fafiri. Wɔn bɔne fafiri no yɔ kwa, ԑnyԑ wɔn nnwuma pa bi nti. Eyi hyԑԑ Yuda ɔsom akannifo a na wɔpԑ sԑ nkurɔfo no hwehwԑ trenee abrabɔ denam nhyehyԑe a wode agu wɔn akwan mu. Nanso wɔn a wogyee Yesu toom sԑ wɔn Agyenkwa ani gyee mmoroso sԑ wɔn bɔne adesoa afi wɔn so.
Bio nso na Yeremia nkɔmhyԑ no nnyԑ Apam foforo mma afeha no mu nnipa ketewaa bi, mmom no na ԑno bԑyԑ Onyankopɔn kwan a Ɔne adesamma bedi nsawɔso. Bere a wokumii Yesu no, n’asuafo no suroe sԑ eyi ama wᴐne Onyankopɔn abusuabɔ a ԑnam ne Ba no so to atwaa. Nanso, na wonnim sԑ ԑnte saa. Yesu nyanee bae nkwa mu bio nnansa akyi no, Ɔbԑhyԑԑ ɔne n’akyidifo no ntam abusuabɔ no den, na afei ɔtrԑwee saa abusuabɔ no mu maa nnipa afoforo.
Sԑ nhwԑso no, Paulo ne Onyankopɔn abusuabɔ denam ne Ba ne so no fii ase bere a Yesu yii no ho adi kyerԑԑ no wɔ Damasko kwan so, Na eyi nnyԑ Paulo ne Onyankopɔn Ba no nkitahodi a etwa to, na na ԑyԑ mfiaseԑ kԑkԑ. Mmere bi akyi no Paulo kae mpԑn bi a “Awurade no gyinaae ne nkyԑn maa n’ahoɔden” (2Timoteo 4:17 WFN) bio nso bere a Paulo kae kyerԑԑ Awurade wɔ “nsoԑԑ a ԑwɔ ne honam no (2 Korintofo 12:8-9). Sԑ Yudani a ɔyԑ nsi no , Paulo ne Onyankopɔ anya abusuabɔ dedaw nanso wɔ akyirikyiri. Seesei, sԑ Kristoni no woahu Onyankopɔn ankasa.
Yesu hyԑe n’asuafo no bɔ sԑ Ɔne wɔn benya abusuabɔ ԑte saa, bere a ɔkae sԑ “beae baanu anaa baasa behyiam wɔ ne din mu no na ɔwɔ wɔn mfinimfini” (Mateo 18:20 WFN). Nokwasԑm no, yԑwɔ Yesu bɔhyԑ a ԑne sԑ “nea ɔdɔ Me no M’agya nso bԑdɔ no, na me nso mԑdo no na mayi meho adi akyerԑ no afei nso M’agya bԑdɔ no na yԑbԑba ne nkyԑn ne no atraae” (Yohane 14:21-23 WFN). Living Bible no kaa no tiawa sԑ “sԑ Mԑba nkwa mu bio a ….mԑyi meho adi akyerԑ wɔn a wɔdɔ me na wodi m’asԑm so. Agya no bԑdɔ wɔn nso, na yԑbԑba ne no atraa” (Yohane 14:20-23).
Wɔn a wɔwɔ Apam foforo no mu anya saa Awo foforo no. “Mo, afei, ԑnyԑ honam sintɔ na edi mo so na Honhom, efisԑ sԑ Onyankopɔ Honhom te mo mu a. Na sԑ Obi nni Yesu Kristo Honhom a ɔnyԑ Kristo dea. Sԑ Kristo te wo mu a, wo nipadua awu esiane bɔne nti, nanso wo Honhom no te nkwa mu denam treneeyԑ. Bio nso sԑ Honhom a enyanee Yesu fii owu mu no te wo mu a, Nea Onyanee Kristo fii owu mu no nso bԑma wo nkwa wɔ owu nipadua yi denam ne Honhom a ԑte wo mu so….Wɔn a Onyankopɔn Honhom kyerԑ wɔn kwan no wɔn na wɔyԑ Onyankopɔn mma. Efisԑ moannya Honhom a ԑma moyԑ akoa ma osuro, na mmom woanya Honhom a ama moayԑ mma. Enti yԑteԑԑm sԑ “Abba, Agya” Honhom no ankasa di yԑn ho adanse sԑ yԑyԑ Onyankopɔn mma”(Romafo 8:9-11, 14:16 NIV)
Onyankopɔn ho adesua ne wone ne dɔ a ԑbenyinii akyi no, wobehu sԑ w’akansa ne Yesu honam ayԑ koro. Eyi ne “Agyidifo Abakan a woakyerԑw wɔn din wɔ soro” (Hebrifo 12:23 NIV). Nokware Agyidifo no a wɔyԑ Kristo nipadua no kyԑn asɔre kuw ne ankorankoro a wɔwɔ anaa wɔnni ɔsom Ahyehyԑde biara nnipa de asi ho mu. Ԑyԑ wɔn a wɔde wɔnho to Yesu Kristo so na wɔhwԑ ne kwan sԑ Ɔne Agyidifo Ti wɔn a wɔde Honhom awo wɔn foforo na woayԑ nipadua biako. “Seesei nipadua no nnyԑ akwaa biako na mmom akwaa pii. Sԑ nnan no ka sԑ “esiane sԑ mennyԑ nsa enti mennka nipadua no ho a, eyi mma ɔnkwati sԑ ɔyԑ nipadua akwaa no bi mpo….Aniwa no nso ntumi nka nkyerԑ nsa no sԑ woho nhia me…(1 Korintofo 12:12-21 NIV). Enti yehia yԑn anuanom mmarima ne mmea a wɔwɔ Kristo mu, mpo sԑ yehu yԑnho sԑ yԑne wɔn tebea nnyԑ pԑ koraa a.
Wɔ mfe bi wɔ Ɔwԑn Aban Ahyehyԑde no mu no misuae sԑ ankorankoro nsusuwii…afotu a efi Ahyehyԑde no hɔ ho asԑmmisa yԑ nea wɔmmma hokwan (Ɔwԑn Aban January 15,1983, kratafa 22). Ԑbԑyԑ den mfiase sԑ kyerԑwnsԑm afotu sԑ “sā onipa bi gyidi nnyԑ den koraa a, monnye no ntom a akasakasa biara mmata ho no bԑyԑ adwuma wɔ Ahyehyԑde no mu. Nnipa gu ahorow, ebinom gye di sԑ wotumi di mogyanam biara ne wɔn a wɔn gyidi yԑ mmerԑw nti wonni ԑnam na mmom nhabama. Wɔn a wodi ԑnam no ԑsԑ sԑ wobuu wɔn a wonni animtiaa. Saa ara na wɔn a wonni ԑnam nso mma wɔnnkasa ntia wɔn a wɔpԑ sԑ wodi biribiara efisԑ Onyankopɔn agye wɔn atoom. Ԑnyԑ wotumi sԑ wobebu obi akoa abomfiaa….Sԑ onipa bi bu nna bi sԑ ԑkyԑn nna bi a na ɔfoforo nso bu nna nyinaa sԑ ԑyԑ pԑ a, ԑsԑ sԑ obiara kura ne nteaseԑ” (Romafo 14:1-5 Yarusalem Bible). So wowɔ saa ntease no wɔ wo nuanom ntam a, ԑnde bere a wone Kristofo afoforo no, wԑ wɔyԑ den anaa mmerԑw no, wobehu sԑ wone wɔn nyinaa bԑhyԑ wɔnho den denam obiara gyidi so. (Romafo 1:12 NIV)
Ԑsԑ yԑn nyinaa gye toom sԑnea Asomafo Paulo no yԑe sԑ yebetumi ahu na yԑate Onyankopɔn ho nsԑm ase ketewaa bi mprempren, te sԑ nea yerehwehwԑ yԑn anim wɔ ahwehwԑ a emu yԑ kusuu, nanso ԑbere bi bԑba a yebehu ne ho nsԑm bebree mpu ne mpu. Seesei nea minim nwie pԑyԑ, nanso afei de mebehu nneԑma yiye sԑnea Onyankopɔn hu sԑ ԑfata wɔ me komam mprempren (1Korintofo 13:12). Enti, wɔ bere a Nokware Nimdeԑ a edi mū a ԑfa biribiaara ho nni .hɔ no, ԑyԑ Kristofo hokwan sԑ “ohu” Onyankopɔn denam ankorankoro abusuabɔ a ɔne Yesu Kristo benya. Sԑ wɔnnyԑԑ saa, ԑnde ka kyerԑ Onyankopɔn mprempren sԑ wopԑ sԑ wode Yesu yԑ w’agyenkwa ne w’awurade a woagye no atoom. Ɔto nsa frԑ wo sԑ “Bra me nkyԑn mo nyinaa a wɔde nnesoa asoa mo na moabrԑ na mԑma moanya ɔhome” (Mateo 11:28 TEV). Hwԑ! Migyina wo pon ano rebom,sԑ onipa biara te Me nne na obue Me pon a, Mԑba ne nkyԑn ne no ato nsa adidii” (Adiyisԑm 3:20 KJV). “Saa ara nso na nea ɔdɔ Me no M’agya bԑdɔ no na mԑdɔ no na Mayi Meho adi akyerԑ no pefee” (Yohane 14:21 WFN)
Tagged Nkwagye, Ԑhe na Yԑnkɔ
← Yesu ɔsɔree fii awufo mu wɔ honhom nipadua a aniwa ntumi nhu?
Wɔapa ɔwɛn aban gyidi ho ntama →